कोलोरेक्टल क्यान्सर: स्क्रीनिंग, पहिचान र रोकथाम #ColorectalCancer • Health News Nepal
✍️ डा. राकेश शाह
Colorectal Surgeon MBBS, MS-Colorectal Surgery, MPH (बंगलादेश)
कोलोरेक्टर क्यान्सर (Colorectal Cancer) भन्नाले ठूलो आन्द्रा र मलाशयको क्यान्सर भन्ने बुझिन्छ । कोषहरूमा हुने असामान्य वृद्धिका कारणले लाग्ने यो रोगको समयमा उपचार भएन भने शरीरको अन्य भागमा पनि फैलँदै जान्छ । धेरैजसो कोलोरेक्टल क्यान्सर पोलिप भन्ने सानो मासु पलाएपछि नै सुरु हुन्छ। सामान्य अवस्थाका पोलिप विस्तारै ठूलो हुँदै जाने र क्यान्सरको रूप लिने गर्छन् ।
सामान्यतया कसैको ठूलो आन्द्रामा पोलिप देखिएको छ भने यसले ५ देखि १० वर्षपछि क्यान्सरको रूप लिन सक्छ, त्यसैले यसको समयमै उपचार भएमा पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ ।
कोलोरेक्टल क्यान्सर संयुक्त राज्यमा तेस्रो सबैभन्दा सामान्य क्यान्सर हो र क्यान्सरबाट मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण हो। जसले पुरुष र महिला दुवैलाई असर गर्छ। कोलोरेक्टल क्यान्सरले सबै जातीय र जातीय समूहहरूमा मानिसहरूलाई असर गर्छ र ४५ वर्ष वा माथिका मानिसहरूमा सबैभन्दा सामान्य हुन्छ।
मार्च कोलोन क्यान्सर जागरूकता महिना हो, जुन गाढा निलो रिबन द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। हामी यो महिना कोलोरेक्टल क्यान्सर बारे चेतना जगाउन र रोकथाम तर्फ कार्य गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। गाढा नीलो रिबन लगाउनु भनेको शब्द फैलाउने र बाँचेकाहरूलाई सहयोग गर्न र पेटको क्यान्सरबाट हराएकाहरूलाई सम्झन मद्दत गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो।
कोलोरेक्टल क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा त्यतिबेला लक्षण देखिँदैन । तर बिस्तारै दिसामा रगत देखिने, दिसा गर्दा र्याल जस्तो पदार्थ आउने, दिसा गर्न अप्ठ्यारो हुने अनि कहिलेकाहीँ दिसा गडबडी (कहिले कब्जियत हुने त कहिले पखाला लाग्ने) हुनु, घरी घरी दिसा लागिरहने जस्ता लक्षण देखिन्छ । पेट दुख्ने, पेटमा असहज महसुस हुने, कहिले पेट फुल्ने त कहिले दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ । बारम्बार दिसा लागिरहेको जस्तो पनि हुने, तौल घट्ने, थकाई लाग्ने जस्ता समस्या पनि देखिन थाल्छ ।
कोलोरेक्टल क्यान्सर हुनुको प्रमुख कारण भनेको बढ्दो उमेर हो । तर अधिकांश कोलोरेक्टल क्यान्सर जीवनशैलीका कारण हुन्छ भने थोरै सङ्ख्यामा मात्र वंशाणुगत कारणले भएको देखिन्छ ।
मोटोपना हुने, व्यायाम नगर्ने, अत्यधिक मात्रामा धूमपान र मद्यपान गर्ने, रातो मासु बढी खाने, धूवाँमा सेकेको खानेकुरा धेरै खाने, सागसब्जी कम खाने र रातो मासु तथा प्रशोधित खानेकुरा बढी खानेहरू ठूलो आन्द्रा क्यान्सरको जोखिममा हुन्छन् ।
नियमित स्क्रिनिङ, ४५ वर्षको उमेरमा सुरु गर्नु, कोलोरेक्टल क्यान्सर (कोलोन वा मलाशयको क्यान्सर) रोक्नको लागि कुञ्जी हो। यदि तपाईं ४५ देखि ७५ वर्षको हुनुहुन्छ भने नियमित रूपमा कोलोरेक्टल क्यान्सरको लागि जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं ४५ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुनुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि तपाईं कोलोरेक्टल क्यान्सर हुने उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईं ७५ वर्ष भन्दा माथि हुनुहुन्छ भने, स्क्रीनिंगको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
कोलोरेक्टल पोलिप्स र कोलोरेक्टल क्यान्सरले सधैं लक्षणहरू निम्त्याउँदैन, विशेष गरी सुरुमा। यसैले कोलोरेक्टल क्यान्सरको लागि नियमित रूपमा स्क्रिनिङ गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
कोलोरेक्टल क्यान्सर अत्यधिक रोकथाम योग्य छ र समयमै कोलोनोस्कोपी त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने एक मात्र तरिका हो। लक्षणहरूको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्! यदि तपाइँ ४५ वर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ (वा सानो, यदि तपाइँ कोलोरेक्टल क्यान्सरको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ), तब यो कोलोनोस्कोपी गर्ने समय हो।
यहाँ केहि जोखिम कारकहरू छन् जुन ४५ वर्ष अघि कोलोनोस्कोपी वारेन्ट हुन सक्छ:
• कोलोन पोलिप्स वा क्यान्सरको पारिवारिक वा व्यक्तिगत इतिहास
• अल्सरेटिभ कोलाइटिस वा क्रोनको रोग जस्ता सूजन आन्द्रा रोगहरू
• केही आनुवंशिक अवस्थाहरू जस्तै Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) वा Lynch syndrome
• Familial Adenomatous Polyposis (FAP) ,MAP, PJS etc
स्क्रिनिङ परीक्षण विकल्पहरू :
1) Stool Tests:-
a. Guaiac Based Fecal Occult Blood Test (GFOBT) ले मलमा रगत पत्ता लगाउन रासायनिक guaiac प्रयोग गर्छ। यो वर्षमा एक पटक गरिन्छ।
b. Fecal Immunochemical Test (FIT) ले दिसामा रगत पत्ता लगाउन एन्टिबडीहरू प्रयोग गर्छ।
i. यो पनि वर्षमा एक पटक GFOBT जस्तै गरी गरिन्छ। यसले थप संवेदनशीलता र विशिष्टता पाएको छ।
ii. FIT-DNA परीक्षण (जसलाई Stool DNA परीक्षण पनि भनिन्छ) ले FIT लाई परीक्षणसँग जोड्छ जसले स्टूलमा परिवर्तन भएको DNA पत्ता लगाउँछ। यो हरेक तीन वर्षमा एक पटक गरिन्छ।
2) Flexible Sigmoidoscopy (लचिलो सिग्मोइडोस्कोपी)
यस परीक्षणको लागि, डाक्टरले तपाईंको मलाशयमा छोटो, पातलो, लचिलो, उज्यालो ट्यूब राख्छन्। डाक्टरले मलद्वार भित्र र बृहदान्त्रको तल्लो तेस्रो भागमा पोलिप्स वा क्यान्सरको जाँच गर्छ।
कति पटक: प्रत्येक ५ वर्षमा, वा प्रत्येक १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष FIT सँग।
3) Colonoscopy (कोलोनोस्कोपी)
डाक्टरले मलाशय भित्र पोलिप्स वा क्यान्सर जाँच गर्न लामो, पातलो, लचिलो, उज्यालो ट्यूब प्रयोग गर्दछ।
परीक्षणको क्रममा, डाक्टरले धेरैजसो पोलिप्स र केही क्यान्सरहरू फेला पार्न र हटाउन सक्छ। कोलोनोस्कोपी पनि एक अनुवर्ती परीक्षणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यदि अन्य स्क्रिनिङ परीक्षणहरू मध्ये कुनै एकको समयमा असामान्य केहि फेला पर्यो।
कति पटक: प्रत्येक १० वर्षमा (कोलोरेक्टल क्यान्सरको बढ्दो जोखिम नभएका मानिसहरूका लागि)।
4) CT कोलोनोग्राफी (Virtual Colonoscopy)
कम्प्युटेड टोमोग्राफी (CT) कोलोनोग्राफी, जसलाई भर्चुअल कोलोनोस्कोपी पनि भनिन्छ। एक्स-रे र कम्प्युटरहरू प्रयोग गरेर सम्पूर्ण बृहदान्त्रको छविहरू उत्पादन गर्दछ, जुन डाक्टरलाई विश्लेषण गर्नको लागि कम्प्युटर स्क्रिनमा प्रदर्शित हुन्छ। कति पटक: प्रत्येक ५ वर्ष।
Dr rakesh shah, colorectal surgeon mbbs, ms-colorectal surgery, mph
रोकथाम गर्ने उपायहरू:
जीवनशैलीलाई अलिकति अनुशासित बनाउन सकियो भने यो रोग लाग्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । स्वस्थ जीवन नै यस रोगबाट बच्ने मूलमन्त्र हो । खानपिन र व्यायाममा ध्यान दिनेबित्तिकै धेरै हदसम्म यो रोग लाग्नबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ । त्यसका लागि फलफूल, सागसब्जी र रेसायुक्त खानेकुरा आफ्नो दैनिकीमा ल्याउनुपर्छ । दैनिक योग, व्यायाम गरी तौललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक खानामा जोड गर्ने, जङ्क फुडको सेवनलाई बन्द गर्ने, मद्यपान र धूमपानबाट टाढै बस्नुपर्छ । यस्तो बानीसँगै ठूलो आन्द्राको क्यान्सरका लक्षणहरूबारे जानकारी राखेर बेलैमा यसलाई ध्यान दियौं भने यसको निदान शतप्रतिशत सम्भव छ । जति छिटो स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन थालिन्छ, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावना त्यति नै परपर सर्दै जान्छ ।
विकसित देशमा नागरिक स्वयं ५० वर्षको उमेरपछि स्क्रिनिङका लागि जाने गरे पनि नेपालमा यसको अभ्यास भएको छैन । नेपालमा रोगका लक्षण देखिएपछि अथवा रोगले थलिएपछि मात्रै अस्पताल जाने चलन छ ।
कोलोरेक्टल क्यान्सरको सुरुको अवस्था छ भने शल्यक्रिया मुख्य उपचार हो । सुरुकै अवस्थामा थाहा भएमा शल्यक्रियामार्फत क्यान्सरलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । क्यान्सरको अवस्था अगाडि बढिसकेको छ भने चाहिँ रेडियोथेरापी र किमोथेरापीले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । ठूलो आन्द्राको क्यान्सरको चरणअनुसार उपचारका विधिहरू फरक–फरक छन् । तर, उपचारभन्दा पनि यो रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो, जसबाट उपचार खर्च पनि जोगिन्छ ।
(डा. शाह हाल : वीर अस्पताल, नेपाल नेशनल अस्पताल कलंकी, र नेशनल अस्पताल क्यान्सर अनुसन्धान केन्द्र, जावलाखेलमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)
Tags: Bir HospitalColorectal CancerCorona Virus #Covid19Dr. Rakesh shahFecal Immunochemical TestGuaiac Based Fecal Occult Blood Test (GFOBT)Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) वा Lynch syndrome • Familial Adenomatous Polyposis (FAP)MAPMarch is colorectal cancer Awareness monthNepal National hospital kalankiPJS etcVirtual Colonoscopy
गंगालालमा नेपालमै पहिलोपटक छाती नचिरी मुटुको सफल शल्यक्रिया
कोरोना टेष्ट गर्दा मार्गनिर्देशन पालना गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुरोध